Ngwaọrụ Sidebar WordPress na Shortcode maka Podkpọ Pọdkastị | Martech Zone
Ọ bụrụ n’itinyela ndabara RSS wijetị maka WordPress wee banye a Podcast ndepụta RSS, ị ga-achọpụta na ọ gosipụtara naanị aha na nkọwa. Nke ahụ bụ n'ihi na ọkọlọtọ iTunes maka faili ntanetịime na-agbakwunye mkpado ndị ọzọ maka onyonyo metụtara pọdkastị yana ebe faịlụ pọdkastị ahụ n'onwe ya.
N'agbanyeghị WordPress nwere ya ọdịyo ọkpụkpọ, abụọ na-adịghị arụ ọrụ ọnụ… ruo ugbu a! Enwere m nkụda mmụọ na enweghị m ike ịnwe ka ndị folks kpọọ pọdkastị kachasị ọhụrụ site n'akụkụ m ka m wuru ma nyefee ngwa mgbakwunye WordPress iji mee nke a. Ndị folks na WordPress kwadoro ngwa mgbakwunye, e bipụtara ya na nchekwa, ma na-arụ ọrụ ugbu a na saịtị 200 WordPress.
Budata WordPress Podcast ndepụta Player Widget na ngwa mgbakwunye Shortcode
N'ezie, ị nwekwara ike ịchọ ngwa mgbakwunye site na peeji nke Plugins gị ma wụnye ya n'ebe ahụ.
Ngwa nri ndepụta Podcast
Ọ bụ ngwa mgbakwunye dị nfe nwụrụ anwụ nke ga - enyere gị aka ịbanye Aha maka ngalaba sidebar, tinye nri Podcast gị, setịpụ njedebe na pọdkastị ole ịchọrọ igosipụta, ma setịpụ ogo nke foto ahụ site na pọdkastị (otu nha 0 ga-ezobe ihe oyiyi). A na-eji ihe ọkpụkpọ ọdịyo nke ndabara WordPress eme ihe site na iji ọrụ API, wp_audio_shortcode.
Ọzọkwa, wijetị ga-ebipụta akara ngosi ndepụta. I nwekwara ike tinye nhọrọ gị iTunes, Google Play, na akara ngosi Soundcloud maka ndị ọbịa ịpị. Pụrụ ịhụ ya ka ọ na-eme n’akụkụ anyị!
Podcast ndepụta Shortcode
Ndị ọrụ ole na ole kpọtụrụ ma jụọ m ma m nwekwara ike ịgbakwunye koodu mkpirisi ka ha wee nwee ike itinye nri Podcast na WordPress Audio Player ozugbo na ibe ma ọ bụ biputere, yabụ emelitere ngwa mgbakwunye!
[podcastfeed feedurl = "" quantity = "" imgsize = "" imgclass = "" itunes = "" google = "" soundcloud = "" icons = ""] Ndị a bụ pọdkastị anyị kachasị ọhụrụ. [/ podcastfeed]
ndepụta - Gị adreesị ndepụta Podcast.
ibu - The pọdkastị nke ukwu ị chọrọ iji gosipụta.
imgsize - The size nke ihe oyiyi na-amasị gị iji gosipụta, 0 n'ihi na ọ dịghị ihe oyiyi.
imglass - Klas maka ihe oyiyi ahụ, ndabara bụ nhazi
itunes - Gị iTunes adreesị iji gosipụta na akara ngosi.
google - Adreesị Google Play gị ịchọrọ igosipụta na akara ngosi.
soundcloud - Adreesị SoundCloud gị ịchọrọ igosipụta na akara ngosi.
Akara ngosi - Ma ị chọrọ iji gosipụta akara ngosi, ndabere bụ eziokwu.
Biko nye ngwa mgbakwunye ule na-agba ọsọ na nnukwu nyocha ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị!
Tags: playerpọdkastị ndepụta shortcodePodcast ndepụta wijetịọkpụkpọ PodcastNgwaọrụ pọdkastịPodcast RSS ndepụtaNgwaọrụ Podspọdkastịshortcodeswijetị sidebarWijetị